Axkaamta Ramadaanta Qaybtii 26aad | ToggaHerer
← Daawo: Gudoomiyaha Degmada Taleex Oo Hanjabad Hawada U mariyey Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas kana waramay Xaalada Gobolka Xaysimo
Mabaadii in la rumeeyo oo lagu adkaysto ayaa guul keenta – Rag iyo Dumar taariikhada raadeeyay (13) →
Axkaamta Ramadaanta Qaybtii 26aad
Published on June 11, 2018 by Magan
Caa’isha Rc ayaa Rasuulka CSW wayddiisay haddaan la kulmo habeenkan maxaan idhaa, Rasuulku CSW wuxuu ugu jawaabay in ay ku ducaysato, “Allow waad saamaxaad badan tahay, cidda wax samaaxdana waad jeceshahee na saamax.” Run ahaantii waa duco wax walba koobsanaysa.
Waxa aynnu baraarujin lahayn in ay habeennadan oo kale ay dhacdo in dadku salaadaha sunnayaasha ah ku dadaalaan oogistooda halka kuwi la faray ee lagala xisaabtamayey ay dayacaan. Waxa aad arkaysaa qof Tarawiix ama Tahajud habeen walba u taagan oo haddana salaaddii subax ka hurda, taasi cibaado noqon maysee waa istusnimo. Sunnaha oogisteeda iyo oogis la’aanteeda mid qiyaamaha lagu wayddiinayo maaha, hase ahaate in aad salaadaha faralk ah oogtaa waa mid qiyaamaha ku dul saaran.
Ma diidayo in la tukado salaadaha sunnayaasha ah, sew axa aan leeyahay faralka aynnu ka soo dhalaalno horta, dabadeed sunnayaasha aynnu u soo tafaxaydano, si cibaadadu inooga noqon mid wajiga laynagaga dhufto.
Sakaatul fidrigu waa qofka khaladaadkii ka dhacay intuu soomanaa oo laga nadiifinayo sidu Rasuulku CSW sheegay, “Sakaatul fidrigu waa qofka oo khaladaadkii iyo macsidii ka dhacday lagaga nadiifinayo iyo masaakiinta oo la quudinayo, qofka salaadda ka hor bixiya waa sako la aqbalay, qofka salaadda ka dib bixayana waa sadaqo ka mid aha sadaqooyinka.”
Sakaatul fidriga la bixinnayaa waa cuntada waddankaa laga isticmaalo, adoo bariis cuna dadka qamadi siin maysid, ee waxaa aad cunto un baad dadkana siinaysaa. Isku soo celcelis inta la bixinaya waa laba kilo iyo badh, oo raashin ah sida bariis ama cunto kaydsanta, see daqiiq iyo sonkor ku bixin maysid.
Xilliga la bixinaya waa cadceedda u dambaysa maalinta Ramadaan marka ay dhacdo ee ay soo baxdo cadceedda maalinta ciiddu, “Qofka salaadda ka hor bixiya waa sako la aqbalay, qofka salaadda ka dib bixayana waa sadaqo ka mid aha sadaqooyinka.”